ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Ruisheng International Trade Co., Ltd.
JIAXING RUISHENG အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Anhui Three Brother Potato Industry Co., LTD ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစင်တာနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား သီးသန့်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည်။ ဖန်ခေါက်ဆွဲ၊ အသင့်စား ဖန်ခေါက်ဆွဲများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Jiaxing City တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းသည် ရှန်ဟိုင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီး၊ Shanghai Pudong နှင့် Hongqiao လေဆိပ်မှ တိုတောင်းသော ကားဖြင့်သွားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်း၊ ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အတွေ့အကြုံ အနှစ် 20 ကျော်ရှိသော စုပေါင်းအတွေ့အကြုံရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Anhui Three Brothers Potato Industry Co., Ltd.
Anhui ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိပြီး 2002 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လုပ်သားအင်အား : ဝန်ထမ်း 450 >
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် : > 65,000 MT / Annum
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးကာ အဆုံးမှအဆုံးပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံပေါင်း 40 ကျော်တွင် အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးမြင့် Instant Glass ခေါက်ဆွဲများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရှိဆုံး ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ Zhengwen အမည်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
1. အာလူး Glass Noodles အမျိုးမျိုး
2. Instant Glass ခေါက်ဆွဲခြောက်
3. ကိုယ်တိုင် အပူပေးထားသော Hotpot Glass ခေါက်ဆွဲများ
4. River Snails Hot and Sour Rice Noodles
Glass Noddle ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် R&D၊ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှ FMCG စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နှစ် 20 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
1. Wal-Mart၊ Metro၊ RT-Mart၊ Carrefour Hypermarket Chains၊ Convenience Store Chains နှင့် OEM Food စက်ရုံများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Zhengwen အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကို တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။
1. မြောက်အာရှ : ကိုရီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်
2. အရှေ့တောင်အာရှ : မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား။
3. အခြားဒေသ : သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက။
4. သြစတြေးလျ : သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်
5. မြောက်အမေရိက- အမေရိကန်၊ ကနေဒါ။
6. အခြားဒေသ : ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသည် ISO9001၊ ISO22000၊ HACCP၊ HALAL၊ BRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသား အစားအသောက် အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စံနှုန်းများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။
"ရိုးသားမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ Win-Win" သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ we always put the benefit of customer first and we aim to provide Green and Healthy Glass Noodles food for the world.
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီပံ့ပိုးပြီး Instant Glass Noodles စျေးကွက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် “အနိုင်ရ-win” အနာဂတ်ကို အတူတကွဖန်တီးရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
---ပိုး ကန်စွန်းဥ ခေါက်ဆွဲ/ကြာဇံ
---ကျယ်ပြန့် ကန်စွန်းဥ ခေါက်ဆွဲ/ကြာဇံ
---Mung Bean Glass ခေါက်ဆွဲ/ကြာဇံ
2. Instat Glass ခေါက်ဆွဲများ
Vegan နှင့် NON Vegan အသင့်စား ချဉ်ချဉ်ဖန်ခေါက်ဆွဲ အမျိုးမျိုး၊ စုစုပေါင်း ထုတ်ကုန် ၄၀ ခန့်ရှိသည်။
3. Self-Heating Hotpot
Vegan နှင့် NON Vegan self-Heating Hotpot အမျိုးမျိုး၊ စုစုပေါင်း ထုတ်ကုန် ၁၅ ခုခန့်ရှိသည်။
စုစုပေါင်း ထုတ်ကုန် ၈ မျိုးလောက်ရှိတယ်။
5. Chongqing ခေါက်ဆွဲ
စုစုပေါင်းထုတ်ကုန် 12 လောက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Instant Glass Noodles များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရှိဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်- Instant Glass Noodle စျေးကွက်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်။
"ရိုးသားမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ Win-Win" သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏အကျိုးကို ရှေးဦးစွာထားကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖန်တီးထားသော စျေးကွက်များကို အမြဲကာကွယ်ပေးပါသည်။ မိတ်ဖက်များအတွက် ကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်အလားအလာများကို ယူဆောင်လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာအတွက် အစိမ်းရောင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော Glass Noodles အစားအစာများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်မာသောရလဒ်များရရှိစေရန်၊ သီးသန့်ဖြန့်ဖြူးမှုအခွင့်အရေးများကို ရေရှည်အတွက် ကာကွယ်ရန် စျေးကွက်အတွင်းရှိ ပါတနာများကို ကာကွယ်ပါမည်။
အနှစ် 20 ကျော် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖန်ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်မှုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခေတ်အမီဆုံး၊ အလိုအလျှောက် စက်ရုံကြီးတစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အမျိုးအစားစုံလင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ဝေစုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချခြင်းတို့ကို တစ်ဦးတည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် လက်ရွေးစင်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များသည် စိတ်သဘောထားမြင့်မားပြီး ဖောက်သည်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အပြည့်အဝပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး ဖောက်သည်များနှင့်အတူ ကြီးထွားလာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထူးချွန်သောအဖွဲ့များသည် မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆို ချောမွေ့စွာ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူတိုင်း၏ ထုတ်ကုန်နှင့် အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် သင့်ကိုကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်မျှော်လင့်ပါသည်။